Hirshabeellee oo ka hadashay halka uu marayo wacyi-gelinta dastuurka – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Hirshabeellee oo ka hadashay halka uu marayo wacyi-gelinta dastuurka
By Aadan Sooyaal / March 5, 2020 March 5, 2020
Muqdisho-(SONNA)-Wasiiru Dowlaha arrimaha dastuurka ee maamul Goboleedka Hirshabeelle mudane; Saaddaq Muqtaar Cabdulle, ayaa sheegay in uu meel wanaagsan u marayo kulamadii wacyi-gelinta arrimaha dastuurka oo Maalmahan ka socday Jowhar.
Wasiir, Saaddaq Muqtaar oo la hadlayay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in Saddxedii Maalmood ee lasoo dhaafay ay kulamo la qaateen qeybaha kala duwan ee Bulshada, si ay macluumaad dheeri ah ugu bixiyaaan barashada dastuurka iyo sidii loo qabyo tiri lahaa.
Wuxuu sheegay Wasiiru Dowluhu in ay Bulshadu ay su’aalo furan ka weydiinayeen dastuurka, Maqaamka caasimadda, qoontada Haweenka, qaab dhismeedka Dowladda, nidaamka miisaaniyadda, amniga, caddaaladd iyo garsoorka.
Mudane; Saaddaq, ayaa sheegay in ay Shalay soo gaareen Jowhar xubno ka tirsan Guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, iyagoo hoggaanka Hirshabeelle la wadaagi doono qeybaha siyaasadda ee dastuurka iyo sidii loo waafajin lahaa aragtida Bulshada Hirshabeelle.
Waxaa Maalmihii aynu soo dhaafnay gaarayay Dowlad Goboleedyada Dalka wufuud ka socota Wasaaradda dastuurka iyo Guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, si ay la tashiyo ula soo sameeyaan hoggaanka iyo Bulshada maamullada Dalka.